Ha Iigu Yimaaddo Talyaaniga Isaga Ayaa Ii Baahane – Cristiano Ronaldo Oo Bannaanka Keenay Dhiilaha Messi Iyo Real Madrid, Digniin Culusna U Diray | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
(11-12-2018) Bal qiyaas sida ay noqonayso kubadda cagta Talyaanigu iyo in xiisihii horyaalkaasi soo laaban lahaa haddii uu Lionel Messi qaato go’aanka Cristiano Ronaldo oo kale oo uu ku biiri lahaa mid ka mid ah kooxaha dalkaas oo ay iska hor iman lahaayeen CR7.
Waa xaqiiq in dunida oo dhan ay daawan lahayd, xamaasadda horyaalkuna sare u kici lahayd, laakiin ay adag tahay inay dhacdo sababtoo ah Lionel Messi ma qorshaynayo inuu qaato go’aanka Ronaldo kaga dhaqaaqay kooxdiisii hore oo kale.
Xiddiga Juventus ee Cristiano Ronaldo oo waraysi siiyey wargeyska Gazzetta ee kasoo baxa Talyaaniga ayaa waxa uu ka hadlay sida ay noqon lahayd haddii uu Messi qaato go’aankiisa oo uu horyaalka Serie A tago, waxaana uu tibaaxay inuu jecel yahay tartankiisa, hase yeeshee aanu hadda u darsanin.
Ronaldo oo diiday casuumad Spain uga timid oo uu xalay ku garab fadhiisan lahaa xiddigo badan oo ay ku jiraan Messi, Griezmann, Chiellini, Bonucci iyo Dybala oo garoonka Santiago Bernabeu ku daawaday ciyaartii finalka Copa Libertadores ee River Plate iyo Boca Juniors, ayaa waxa uu ugu baaqay Messi inuu yimaaddo Talyaaniga.
Ronaldo oo la weydiiyey inuu u darsaday Messi iyo in kale, ayaa waxa uu yidhi: “Maya, isaga ayaa laga yaabaa inuu ii darsaday. Anigu waxaan kasoo ciyaaray England, Spain, Italy, Portugal iyo xulka qaranka, isaguna weli Spain ayuu joogaa.”
Cristiano Ronaldo waxa uu ku dooday inuu hayso khibrad badan oo uu horyaalo kala duwan kasoo ciyaaray laakiin Messi halkii iyo kooxdii uu ka bilaabay kubadda uu weli ku sugan yahay, hase yeeshee uu shaqsiyan yahay qof jecel tartanka oo uu jelaan lahaa in Messi ay iska hor yimaaddaan, waxaanu yidhi: “In isagu ii baahan yahay ayaa laga yaabaa, laakiin anigu noloshu waxay ii tahay loollan, waanan jecelahay tartanka iyo inaan dadka ka farxiyo, waxaanan jeclaan lahaa inuu maalin yimaaddo Talyaaniga.”
Xiddiga reer Portugal waxa uu Messi u sheegay inuu aqbalo loollan ama tartan cusub, waxaanu yidhi: “Sidayda oo kale, waa inaad aqbasho loollanka. Siday doonto ha noqotee, haddii uu ku faraxsan yahay halkaas, waan ku ixtiraamayaa waana ciyaartoy cajiib ah iyo wiil wanaagsan laakiin anigu cidna ma tebo, tanna waa noloshayda oo aan ku faraxsanahay.”
Dhinaca kale, Ronaldo oo la weydiiyey ciyaartooyada yaabka geliyey ee Juventus jooga ee ay iska garab ciyaaraan, waxa uu ku jawaabay: “Caddaalad maaha inaan magacyo yar sheego, laakiin waxaan odhan karaa waa kooxdii ugu wanaagsanayd ee abid aan la ciyaaro. Waxaanu nahay koox meel kasta kaga sarraysa naadiyada kale, waana dad meel u wada jeeda oo wanaagsan, guulna doonaya.
“Haddii aanay Dybala ama Mandzukic ciyaarin, waxa aad arkaysaa iyagoo haddana faraxsan oo dhoola-caddaynaya, anigana way ii qurux badan tahay, wax ka duwana waan ka helaa. Xattaa Madrid waxay ahaayeen ciyaartooyo wanaagsan laakiin halkan ayaa kasii fiican, waanan dareemayaa. Way ka duwan tahay Madrid, waxaanad moodaa sidii qoys oo kale.”